Imibuzo evame ukubuzwa - i-Guangzhou Beyond Lighting Co., Limited
Ingabe uyi-factroy yangempela noma inkampani yezohwebo?
Singumboni wokukhanyisa wesiteji wangempela oseBaiyun Distract of China, ongumnikazi weminyaka engaphezu kwengu-10 yokukhanyisa izigaba ze-R & D.
ikakhulukazi imikhiqizo MOQ ucezu olungu-1, njengoba siqonda ukuthi amakhasimende angathanda ukuzama isampula okokuqala kwesinye isikhathi.
Siyini isikhathi semikhiqizo yakho esimaphakathi?
Kakhulu imodeli yethu yokuthengisa eshisayo imvamisa siyigcina esitokweni ngakho-ke singenza ukulethwa okusheshayo. Ngakho-ke uma isampula noma i-oda elincane lokukhokha ikakhulu isikhathi sitholakala ngesitoko. Isikhathi sokulungiselela ngokusemthethweni sisondele ezinsukwini eziyi-15-25 ngokuya ngobuningi be-oda lakho.
Ukudluliswa kwebhange le-TT, iWestern Union, iPaysend. I-oda elincane lidinga idiphozi engu-100% ngaphambi kwemikhiqizo, i-oda elikhulu 30% -50% idiphozi ngaphambi kokukhiqizwa nebhalansi ephelele ngaphambi kokuthunyelwa.
Iwaranti yeminyaka emibili. Ngesikhathi sewaranti uma izibani zenzeka noma yiziphi izinkinga sizobheka nawe futhi sisuse izinkinga bese sithumela ngokukhululekile ukufaka ezinye izingxenye ze-asap.Uma iwaranti isiphelile, sizonikeza ukuholwa kwezobuchwepheshe futhi sithumele izingxenye zokungcebeleka eziphethe.
Ngingakwazi ukubeka ilogo yami kwizibani?
yebo, kuya ngobuningi be-oda, singakhuluma imininingwane ngaleso sikhathi
Ngingakwazi ukubeka i-oda lesampula?
Yebo, Samukela isampula oda
Kuthiwani ngezimo zokupakisha zemikhiqizo yakho?
Iphakethe elijwayelekile ibhokisi lokuthekelisa (sebenzisa i-EPE igcwele kahle amalambu) kanye nekhadibhodi engqimba engu-5
Izindiza zezindiza azikhetheli futhi zamukelekile ngokwezifiso
Zingaki izinsuku ezivame ukuthatha ukuthunyelwa?
Kuya ngendlela yokuthumela, ngokuhambisa umnyango ngomnyango ngokujwayelekile kuthatha izinsuku zokusebenza ezi-3-7; Ngomoya ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingama-5-7; Ngolwandle kuncike endaweni nebanga, ngaphandle kwase-Asia, imvamisa kuthatha izinsuku ezingama-25-40.
Ngingayithola kanjani ikhathalogi yakho?
sicela wabelane nami nge-imeyili yakho noma i-whatsApp, esizokuthumela yona